Islaamka iyo Cilmiga Sayniska. By.Abdullaahi Beershiya Qaybtii 13aad | #1Araweelo News Network
Islaamka iyo Cilmiga Sayniska. By.Abdullaahi Beershiya Qaybtii 13aad
Cali Ibn Rabban Al-Tabari
Magaca uu helay Cali Bin Rabban kumuu imaan oo kaliya ammaanta uu huwiyey khabiirkii cilmiga Faysigiska ku caanka ahaa ee Zakariya Al Razi, balse xaqiiqadu waxay ahayd inuu ku helay, kadib markii uu soo saaray daawooyin iyo waxyaabo ku cusbnaa cilmiga sayniska.
Wuxuu soo saaray toddoba qaybood oo uu xambaarsana buug la odhan jiray Firdous Al Hikmat, kaasoo ahaa buuggii ugu horreeyey ee koobsada cilmiga caafimaadka, waxaana ku dhammaa dhammaan qaybaha caafimaadka eek ala duwan. Inkastoo waxyabihii uu qoray qaybo yar oo ka mid ah uun dib loo daabacay qarnigii 20aad.
Qoraaladiisan oo aakhirkii loo daabacay Ingiriisi iyo Jarmal waxa ka mid ahaa qqybahaas;
1. Qaybta 1aad waxay ahayd Kulliyat-e-Tibb oo ahayd qayb lagaga hadlaayey aasaaska cilmiga caafimaadka
2. Qaybta 2aad: waxay ka hadlaysay aqoonta xubnaha bani’aadamka, sharciyada caaifmaadooda lagu ilaalinaayo iyo cudurro ku dhaca muruqyada.
3. Qaybta 3aad: Cuntooyinka la qaadanaayo waqtiyada caafimaadka iyo cudurrada qaar dadku hayaan.
4. Qahbta 4aad: waxay ka hadlaysaa dhammaan cudurrada ku dhaca jidhka laga bilaabo madaxa ilaa suulka cagaha.
5. Qaybta 5aad: sharaxaadaha dhadhamada iyo dhadhamada.
6. Qaybta 6aad: Daroogooyinka iyo sumaha
7. Qaybta 7aad: waxay la xidhiidha cimilada iyo xidigiska…. La soco….